မုန်တိုင်း WUTIP အဆင့်-၂ တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ဖြင့် ဗီယက်နန်ကမ်းခြေကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည် « MMWeather Information BLOG
« အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း WUTIP-20W ၏ မုန်တိုင်း အဖျားပိုင်း ဗီယက်နန်ကမ်းခြေအား စတင်ဖြတ်ကျော်လျှက်ရှိ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ် »
မုန်တိုင်း WUTIP အဆင့်-၂ တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ဖြင့် ဗီယက်နန်ကမ်းခြေကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်
By mmweather.ygn, on September 29th, 2013
အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေသော တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း WUTIP(20W)သည် နောက်ဆုံးရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာမည် မဟုတ်တော့ပဲ မူလခန့်မှန်းလမ်းကြောင်းအတိုင်း ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဒါနန်းမြို့မြောက်ဘက် မိုင် ၁ဝဝ ကျေ်ခန့်၊ HUE မြို့ မြောက်ဘက် ၆၅ မိုင်ခန့်မှ ဗီယက်နန်ကမ်းခြေအား စက်တင်ဘာလ ၃ဝ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
JTWC မှ ထုတ်ပြန်သည့် Warning-11 တွင် မုန်တိုင်း ဗီယက်နန်ကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်စဉ် မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လေတိုက်နှုန်း 90 knots(တစ်နာရီ ၁ဝ၄ မိုင် ခန့်)၊ မုန်တိုင်းဒီလှိုင်းအမြင့် ၂၈ ပေ ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မုန်တိုင်းသည် လက်ရှိ အချိန်တွင် အချင်းမိုင် ၃၄၅ မိုင်ရှိပြီး လာအိုနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းအား အဆင့်-၁ ကုန်းတွင်းတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ် ဆက်လက် ဖြတ်ကျော်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နောက်ပိုင်း၌ မုန်တိုင်းအကြွင်းအကျန်များသည် ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းဒေသများသို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းဒေသများတွင် မိုးသည်းထန်ပြီး ရေကြီးရေလွှမ်းမှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အပေါ် ကြိုတင်သတိပြု ကာကွယ်နိုင်ကြရန် အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။
29/06Z (TYPHOON 20W (WUTIP) WARNING NR 011- 090 knots)
TYPHOON 20W (WUTIP) WARNING #11
WTPN32 PGTW 290900
290600Z POSIT: NEAR 16.7N 111.7E
MOVING 270 DEGREES TRUE AT 07 KNOTS
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT: 28 FEET
29/06Z, WINDS 090 KTS, GUSTS TO 110 KTS *
29/18Z, WINDS 090 KTS, GUSTS TO 110 KTS *
30/06Z, WINDS 080 KTS, GUSTS TO 100 KTS
30/18Z, WINDS 045 KTS, GUSTS TO 055 KTS
01/06Z, WINDS 020 KTS, GUSTS TO 030 KTS
Uncategorized « အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း WUTIP-20W ၏ မုန်တိုင်း အဖျားပိုင်း ဗီယက်နန်ကမ်းခြေအား စတင်ဖြတ်ကျော်လျှက်ရှိ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ် »
1 comment to မုန်တိုင်း WUTIP အဆင့်-၂ တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ဖြင့် ဗီယက်နန်ကမ်းခြေကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်
Log in to Reply	စက်တင်ဘာလ ၃ဝ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီတွင် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း WUTIP ဗီယက်နန်ကမ်းခြေသို့ ချဉ်းကပ်ရောက်ရှိမည့် အခြေအနေအား GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်မှ ကြိုတင် ခန့်မှန်းထားပုံ ဖြစ်ပါသည်။ မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်အရ မုန်တိုင်း ဗီယက်နန်ကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ချိန် အနည်းငယ် စောနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်အရ မုန်တိုင်းဗဟိုသည် စက်တင်ဘာလ ၃ဝ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၃ဝ နာရီ နောက်ပိုင်းတွင် ကမ်းခြေကို စတင် ဖြတ်ကျော်မည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းရပါသည်။ You must be logged in to postacomment.
« အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း WUTIP-20W ၏ မုန်တိုင်း အဖျားပိုင်း ဗီယက်နန်ကမ်းခြေအား စတင်ဖြတ်ကျော်လျှက်ရှိ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ် »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum